Gudoomiyaha Urur-siyaasadeedka Hadhay Ee UDHIS , Muj. Dhegaweyne Oo Gaadhay Burco, Kuna Hanjabay Banaanbaxyo Hubaysan Haddii Loo Baahdo – Araweelo News Network (Archive)
Gudoomiyaha Urur-siyaasadeedka Hadhay Ee UDHIS , Muj. Dhegaweyne Oo Gaadhay Burco, Kuna Hanjabay Banaanbaxyo Hubaysan Haddii Loo Baahdo
Burco(ANN) Guddoomiyaha Urursiyaasadeedka dhacay ee UDHIS Ibraahin C/llaahi Xuseen Dhegowayne iyo Saraakiil Ururkaa ah ayaa ku hanjabay banaanbaxyo ay samaynayaan oo ay adeegsan doonaan hub haddii loo baahdo, waxayna sidaa ku sheegeen UDHIS, mar ay booqasho ku
tegeen maanta Magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer.
Dadweyne iyo gaadiid tiro badan ayaa kaga hortegey Muj. Dhegaweyne Tuuluda Qoyta ee Duleedka Burco, wuxuuna mar uu la hadlayay dadkaa soo dhoweeyay ku sheegay ujeedada safarkiisa dhinaca Burco mid la xidhiidha dardar gelinta hawlaha ururkiisa UDHIS ee ka midka ahaa kuwii ku hadhay shuruudihii gudida diiwaangelinta Ururada iyo ansixinta axsaabta Qaranka oo 20 April 2012, lagu dhawaaqay.
Mujaahid Ibraahin Dhegaweyne oo xukuumaddu safarkiisa insha ku hayso, kadib markii uu ka dhashay dareen shaki ah, isl markaana ay soo baxeen warar sheegaya inay wadaan Muj. Dhegaweyne iyo qaar ka mid ah Ururada aan ku qancin kala saarista Ururada siyaasadu falal waxyeelaynaya amaanka Qaranka. Laakiin wuxuu sheegay Inay mudahaaraad Salmi ah oo hore uga dhicisoobay ay Berri ka bilaabi Doonaaan Gobolada Dalka oo dhan, isagoo Taageerayaasha urursiyaasadeedka UDHIS ku Gubaabiyey in aanay ku niyad jabin hadalada uu ku sheegay Hadaaq ka soo baxay Guddigii Diiwangelinta, isagoo u soo jeediyey in maalinta berri ah ay si weyn u muujiyaan dareenkooda.
Muj. Dhegaweyne wuxuu ku eedeeyay xukuumadda Madaxweyne Siilaanyo mid ku tumatay dumuqraadiyadii uu ka tegey Madaxweynihii ka horeeyay ee Daahir Rayaale Kaahin. Sidaa awgeed aanay aqblayn wuxuu ugu yeedhay cabudhinta dawladu wado.
Sidoo kale Xildhibaan Maxed Faarax Qabille oo ka mid ah Xildhibaanada Golaha Wakiilada ayaa sheegay in haddii la yidhi “urursiyaasadeedka UDHIS, wuu hadhay” ay ahayd Khad warqad lagu qoray oo aan Socon Doonin. Xildhibaan Qabile wuxuu sheegay inay wixii khaldamay saxmayaan, iyadoo Xukunkii loo Gudbiyey Maxkamadda, isagoo yidhi, “Waxa Goobjoog ka noqonaya International Committee, waxa Dusha ka ilaalinaya Goobjoogayaal Caalamiya oo aqoontooda leh, lixda Gobolna waxa loo soo dirayaa Guddi Xaqiiqo raadin ah Ayuu yidhi Xildhiban Qabille.
Waxa kaloo halkaa hadlo hanjabaad ah ka jeediyay Xoghayihii Guud ee Urursiyaasadeedka UDHIS, Siciid Xaji Axmed Qulunbe, Oday Dayr Maxmed iyo Badhasaabkii hore Guleed Dahir Samatar, kuwaas oo ku hanjabay in haddii xukuumaddu isku daydo inay ku baajiso Awood boolis oo dadka Cabudhiya ay keento ay ugu jawaabi doonaan xabbad, iyagoo sheegay in aanay cidina cid ka awood badnayn oo ay adeegsanayaan wax kasta oo ay ku fushanyaan qorshohooda siyaasadeed.
Dhinaca kale warar dheeraad ah ayaa sheegaya inay Ururada hadhay qaarkood oo ay ka mid yihiin UDHIS, Gurmad iyo NDP, ay weli kusii dhegan yihiin inaan aqbalin natiijadii Gudida Diiwaangelinta Ururada iyo Axsaabta Qaranka, isla markaana u balameen inay 1 May 2012, oo ku beegan maalinta Beri mudaharaadyo ka samaynayaan gobolada dalka oo dhan haddii ay suurta gasho. Laakiin xukuumadda oo ka war hasya arrimahaa iyo dhaqdhaqaaqyada ayaa diyaarisay ciidamo boolis ah oo loo qorsheeyay inay ka hortagaan Mudaharaadyadaa.
Published April 30, 2012 By info
Somaliland Government Deported A UN Officer To Nairobi
Cismaan Hindi Oo Ka Hadlay Khilaafka Xisbiga UDUB Ee Gudoomiyaha, Ku Xigeenkiisa Iyo Dhawaaq Kasoo Yeedhay Jamaal Cali Xuseen